Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Chile » Chile ayaa dib u fureysa dalxiisayaasha si buuxda loo tallaalay
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Chile • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Karantiilnimada socdaalayaasha caalamiga ah ee si buuxda loo tallaalay ayaa la qaadi doonaa haddii natiijooyinka baadhitaankooda PCR ee la sameeyay markay yimaadeen Chile ay yihiin kuwo taban.
Gelitaanka Chile wuxuu noqon karaa saddexda garoon ee Iquique, Antofagasta, iyo Arturo Merino Benítez.
Kahor intaadan dalka soo gelin, tallaalada ay dowladdu hesho waa in la xaqiijiyaa si baasaboorka socodka looga soo saaro Chile.
Dadka aan la tallaalin (oo markaa aan dalban karin kaarka guuritaanka) weli looma oggola inay dalka soo galaan.
Saraakiisha dowladda Chile waxay ku dhawaaqeen in laga bilaabo Noofambar 1, 2021, karantiilinta socdaalayaasha caalamiga ah ee tallaalka buuxa la qaadi doono haddii natiijooyinka baaritaanka PCR -ga la sameeyay markay yimaadeen Chile waa diidmo.
Dadka socotada ah waa in si buuxda loo tallaalo, oo tallaallada waa in lagu aqoonsadaa Chile.
Shuruudaha soo -galitaanka soo socdaa waxay u dhigmaan macluumaadka hadda jira, rasmiga ah:
Gelitaanka Chile waxay noqon kartaa saddexda garoon ee Iquique, Antofagasta, iyo Arturo Merino Benítez (SCL, Santiago).
Kahor intaadan dalka soo gelin, tallaalada ay dowladdu hesho waa in la xaqiijiyaa si baasaboorka socodka (pase de movilidad) looga soo saaro Chile. Codsiga aqoonsiga tallaalada waxaa laga heli karaa internetka.
Buuxi foomka elektaroonigga ah “Dhaarta Socdaalka” ilaa 48 saacadood ka hor intaadan fuulin, kaas oo ay tahay inaad bixiso macluumaadkaaga xiriirka, caafimaadka, iyo taariikhda goobta. Foomkan waxaa ku jiri doona koodh QR oo ah hab xaqiijin. Waxaa lagu buuxin karaa khadka tooska ah (nooca Ingiriisiga ayaa la heli karaa).
Dalxiisayaasha galaya Chile waa inay lahaadaan caymis caafimaad oo safar oo daboolaya qaddar dhan $ 30,000.
Caddaynta baaritaanka PCR -ga ee taban ayaa la qaatay 72 saacadood ka hor inta aan la fuulin. Tijaabada PCR ayaa mar kale lagu sameeyaa gegida dayuuradaha ee Chile.
Tijaabada PCR -ga waxaa lagu sameeyaa gegida dayuuradaha ee Chile. Dadka soo galaya dalka waa inay ku safraan gaadiid khaas ah oo si toos ah u tagaan goobta cayiman ee joogitaanka laga bilaabo markay soo galaan oo ay halkaas ku sugaan natiijada baaritaanka PCR (muddadu ilaa 24 saacadood). Haddii baaritaanka uu yahay mid diidmo ah, karantiilnimada 5-ta maalmood ah ma khuseyso.